eHimalayatimes | यौन र जीवन | पुरुषको पहिलो नजर किन महिलाको छातिमा पुग्छ ?
19th February | 2019 | Tuesday | 2:43:41 PM
पुरुषको पहिलो नजर किन महिलाको छातिमा पुग्छ ?
POSTED ON : Saturday, 30 June, 2018 (1:08:33 PM)
हिमालय टाइम्स । पुरुषहरु महिलाको स्तनमा किन अकर्षित हुन्छन् । के कारण उनीहरुको पहिलो नजर महिलाको छातिमा पर्न जान्छ ? योसँग सम्बन्धित केही तथ्य यस्ता छन् । सम्भोगको दौरान स्तनले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । चरम सीमासम्म पुग्नका लागि स्तनले ठूलो मद्दत गर्छ । वास्तवमा धेरैपटक सेक्सको सुरुवातमा पनि यसबाट नै हुन्छ । अध्ययनका अनुसार ६९ प्रतिशत महिलाहरु आफ्नो स्तनलाई ठूलो देखाउन कोसिस गर्छन् । स्पष्ट रुपमा पुरुषहरु कहिले पनि उनीहरु महिलाको स्तनप्रति किन यति धेरै आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुरा बताउन सक्दैनन् । यसमा भएको अध्ययनमा थुप्रै कारणहरु पत्ता लागेका छन् । जब पुरुषहरु महिलासँग कुराकानी गर्न थाल्छन् तब उनीहरुको आँखा महिलाहरुको आँखामा नभई वक्षस्थलमा हुने गर्छ ।
त्यसपछि उनीहरु गर्दनमा हेर्ने गर्छन् र त्यसपछि मात्र आँखामा पुग्छन् । उनीहरु बिस्तारै आफ्नो हर्मोनको आदेशअनुसार वक्षस्थलमा नियाल्न पुग्छन् । यस्तो ‘बडी ल्याङ्वेज’ भएका पुरुषहरुलाई महिलाहरुले तुरुन्त पत्ता लगाइहाल्छन् र उनीहरुलाई कामवासना भएको पुरुषको संज्ञा दिने गर्छन् । – यस्तो अवस्थामा प्रत्येक पटक पुरुषहरुको मानसिकता गलत हुँदैन । थुप्रै अध्ययनका आधारमा कुराकानीको सुरुवाती अवस्थामा पुरुषहरुले महिलाको वक्षस्थललाई नै हेर्ने कुरा पत्ता लागेको छ । वास्तवमा पुरुषहरुलाई लाग्छ कि स्तन नै उनको नारित्वलाई सार्थक बनाउने एउटा वस्तु हो र सेक्सफिलको माध्यमले कनेक्सन स्थापित गर्छन् । यदि स्तन सानो र अत्यधिक ठूलो छ भने पुरुषहरु धेरै बेर स्तनतर्फ हेर्ने गर्दैनन् जसका कारण महिलामा कहिलेकाँही हीनभावना उत्पन्न हुने गर्छ । कुरा गर्दा पुरुषहरुको नजर त्यतिवेला स्तनमा धेरैपटक जाने गर्छ जतिवेला स्तन सेक्सी र मध्यम साइजको हुन्छ ।
जब लुगाबाट स्तन थोरै मात्रामा देखिएको छ भने पनि पुरुषहरु कुराकानी गर्ने क्रममा पटक पटक स्तनमा हेर्ने गर्छन् । यदि स्तन आकर्षक छ भने पुरुषहरु कुराकानीमा राम्रोसँग ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैनन् उनीहरुको मन–मस्तिष्कले उनीहरुलाई जबर्जस्ती स्तनतर्फ आकर्षित गराइरहेको हुन्छ । त्यसकारण नचाहँदा नचाहँदै पनि धेरैपटक पुरुषको नजर स्तनमा अडिग भइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरुले पुरुष कामुक भएको सोच्ने गर्छन् । अध्ययनका अनुसार यदि महिला टाढा छिन् र ती पुरुषलाई हेरिरहेकी छैनन् भने पनि ९५ प्रतिशत पुरुषको आँखा महिलाको छातीमै हुन्छ । –एजेन्सी